Akhriso Tilmaamaha ninka wax jecel - Buzuri texts
1.Nuglaanaho: waa calaamad lagu arko ninka, waxay ka turmaysaa inuu culays xoog lihi haysto oo jacayl ah. Wuxuu nugayl u muujinayaa gabadha uu jecel yahay iyo cida ka ag-dhaw Calaamadaha ugu caansan
4.Wax-kasta-haye: mar kasta oo ninka ay wax weydiiso gabadhu uu jecel yahay wuxuu ugu jawaabayaa haye, xittaa haddii aanu awoodi karin. Waayo waxa haya culayska uu leeyahay jacaylku.
5. Hadal-macaan: waa albaabka ugu horeeya ee laga galo qofka. Ninku wuxuu markaba ku qaabilayaa hadal macaan oo soo dhawayn wata.
WQ: Qoraa Buzuri Aweis
READ ALSO 7 ficil oo lamaanahaaga tusaya inaad si dhab ah u jeceshahay